Fiaraha-miasa amin'ny orinasa mampiasa TWIKI
Ny maha-zava-dehibe ny fizotran'ny asa sy ny fifandraisana malalaka dia tsy azo hamaivanina velively, indrindra eo amin'ny tontolon'ny fifaninanana mihoapampana izay ny hafainganana, ny fahatokisana ary ny maha-matihanina no anton'ny fahombiazana. Saingy fikambanana maro no miasa ao amin'ny "kolotsaina silo" izay tsy mamporisika ny fizarana vaovao amin'ny andraikitra, asa na departemanta.
Ny fitaovana toy ny Twiki dia manampy ireo orinasa hialana amin'ny kolontsaina tsy miara-miasa toy izany.
TWiki® dia wiki malefaka, mahery ary mora ampiasaina orinasa, sehatra fiaraha-miasa amin'ny orinasa, ary sehatry ny fampiharana tranonkala. Wiki Structured izy io, izay mazàna ampiasaina amin'ny fampandehanana sehatr'asa famolavolana tetikasa, rafi-pitantanana antontan-taratasy, tobim-pahalalana, na fitaovana groupware hafa, amin'ny intranet, extranet na Internet.
TWiki dia amin'ny ankapobeny dia wiki voarafitra, izay miasa amin'ny sehatry ny orinasa Wikipedia na tambajotram-pifandraisana ao anaty trano, miankina amin'ny safidin'ny orinasa hampiasa azy io. Mety hampiasa an'ity fitaovana ity ny mpitantana hananganana tetik'asa, hitantanana antontan-taratasy, hametrahana intranet, na koa lozisialy iray. Twiki dia mamela ihany koa ny safidy mandroso toy ny Transclusion na fampidirana antontan-taratasy na ampahany amin'ny antontan-taratasy amin'ny antontan-taratasy hafa amin'ny alàlan'ny referansa, ny tabilao azo raisina ary ny maro hafa.
Ny fametrahana an'i Twiki ho sehatra fiaraha-miasa dia manome antoka fa misy fampahalalana ho an'izay mila izany. Ireo mpivarotra dia afaka mahazo an'i Twiki ary mahazo ny fampahalalana ilaina avy hatrany, na hifandray amin'ilay olona nahazo alalana amin'ny fotoana tena izy, ary hampihena ny fotoana làlan-dàlana. Ny fanodinana ireo dingana anatiny amin'ny alàlan'ny Twiki dia mahatonga ny fikorianan'ny angon-drakitra sy ny fampahalalam-baovao ho malefaka sy tsy misy tohika, manampy amin'ny fampitomboana ny vokatra sy ny fotoana fohy kokoa.
Twiki dia an sehatra loharano misokatra ary manana vahaolana noraisina ihany koa izy ireo. Ho an'ireo izay mila fanampiana ara-teknika, Twiki dia manolotra ny serivisy an'ny consultants iza no handrindra, hitazona ary hampanjifa ny Twiki.
Tags: fiaraha-miasafiaraha-miasa amin'ny orinasafiaraha-miasa amin'ny ekipatwikiWiki
Ianao no vokatry ny Facebook
Fomba dimy hampidirana ny kolontsaina amin'ny paikadin'ny varotrao